Yintoni ethi 'Kanye Kanye Ngexesha Elithile' Iba Phosakeleyo Ngokongezwa kwayo 'Frozen' - Itv
Eyona Itv Into ethi 'Kanye ngeXesha elithile' ayisiyiyo ngoKongeza kwayo 'Frozen'
Into ethi 'Kanye ngeXesha elithile' ayisiyiyo ngoKongeza kwayo 'Frozen'
Uthando loonxantathu. Iintsana. Oomama ababini abanonyana omnye. Ibhola le-sleaze kunye ne-inguenue yakhe. Ngeminazana ithile yeyona nto iphambili yesepha opera ene-twist: umlingo. Ngumboniso esiwubukeleyo kunye nezintombi zethu ngelixa sizifunxa kwiPringles endaweni yokuphuma ngeCawa ebusuku. Asisoze savuma ukuba sifehards, kodwa linda-ngaba uEmma noHook bamanga nje?!?!
Kumanzi kwidrama, ukubeka ngokukhawuleza iba likhoboka. Inamanzi, kodwa ine-pulp, nayo. Ukususela kwasekuqaleni, abalinganiswa abangahambelaniyo babonelele ngokuzonwabisa okusemgangathweni. Xa uSnow noCharming babelana ngomzuzu osondeleyo, kungaphezulu kokufudumeza intliziyo. UHenry uyintandokazi kuye wonke umntu, kwaye neMad Hatter iyakufanelekela.
Kodwa mhlawumbi lelona candelo linomtsalane ukubeka licala layo elimnyama. Abadali bawathathile amabali obuntwana bethu kwaye batsalela kwiingcambu zabo ezingaqondakaliyo, njengoko uMzalwana uGrimm wayezimisele. Ikhephu ngumzingeli. I-Belle ingaphezulu kobuso obuhle. Nokuba i-Aurora ayisiyonto ingenanto kwaphela. Kwaye ayisiyiyo yonke into egqibeleleyo eparadesi. Abantu bayafa. Abantu bayalila. Lihlabathi esinokulufumana ngasemva kuba ngaphandle kwako konke ukuthakatha kunye nemixube, phantse iyinyani.
Yiloo nto eyenza Ngeminazana ithile ipholile. Iphinda ichaze ezakudala. Kwiminyaka ye-30, iDisney yeza kwaye yanika amakhosazana amazwi amancinci amancinci. Wabayalela ukuba batshayele kwaye bacule, bacule kwaye batshayele. Ayilunganga kwaphela. Ukuba ezokuqala zazingathandekiyo, ubuncinci zazintsokothile. ukubeka ithatha obobunzima kwaye ibanike ukubuyiswa kwenkulungwane yama-21. Emva kwayo yonke loo nto, kumalunga nexesha apho sibona uMhlophe njengekhephu ngaphezu kwesidenge.
Mhlawumbi u-Edward Kitsis kunye no-Adam Horowitz bacinga ukuba bayigqibile indawo yogcino lweentsomi kunye neentsomi. Okanye, okubi kakhulu, mhlawumbi babenexhala lokuba amanqanaba abo afuna iqhubu. Nasiphi na isizathu, badityanisiwe Frozen ’s U-Elsa, u-Anna, kunye noKristoff baya kuba ngumxube, othi umboniso bhanyabhanya wakhe ube sisizathu sabaninzi benguqulelo enxilisayo ye- Let It Go.
Frozen kuhle. Yeyona blockbuster inkulu kaDisney okwethutyana, kwaye abantwana abancinci nabakwishumi elivisayo ngokufanayo banokuba semva kwayo. Ngokuqinisekileyo kukho inzondelelo ngakumbi kubantu beqhwa kwezi ntsuku, kwaye u-Elsa ujonge-alikes phantse bahlala behamba kwimidiya yoluntu.
Kodwa… ayiqhelekanga! Akukho nto ingenasiphelo ngayo. Enye yeefilimu ezintsha zokuxhobisa abantu ababhinqileyo eDisney, ezoyikekayo. Kodwa unyaka ubudala, kwaye sele umbono eyahlukileyo kwi Ukumkanikazi ekhephu. Akukho sidingo sohlaziyo kuhlaziyo.
Kwaye ayilolongezo oluhle. Ilawula umdlalo weyure njenge Frozen 2: Isenzo esiBukhoma , kwaye imixholo i corny kwaye iphindaphindeka. Siyayifumana: U-Elsa uyasokola phakathi kokulungileyo nokubi kwaye akaze azive ngathi uyangena. Inqaku elo lenziwa kwisiGaba soku-1, kutheni ke kufuneka ufune?
ukubeka lixesha layo lesine. Eyokuqala yayimangalisa. Eyesibini yayilungile. Masingathethi malunga neyesithathu. Iyaqengqeleka isiya ngakulo lonto indawo-uyazi, indawo apho i-TV iya kufa khona. Oko ababhali bazama ukuphosa kumacwecwe amatsha sisicwangciso-qhinga kuphela.
Ke kutheni ungajongi kwelinye lamazwe asentsomini kaHans Christian Andersen? Okanye ujonge ingqokelela yabazalwana bakaGrimm?
Kuba I-OUAT, ifriziwe yindawo yokuthengisa. (Umhl. Qaphela: Uhlobo olunjengokuba iDazzler yaziswa njani kuphela kwiX-Men Yokubopha nge-KISS . Uphumelele lo mjikelo, iDisney.) Ixabiso eliphantsi. Akufanelekanga ukuba yongeze nantoni na kwiskripthi (kwaye ayenzi). Ngeliphandle, injongo kukutsala ababukeli. Ke, ewe, ubukrelekrele balo mboniso bonakaliswe ngumnqweno wemali ebandayo enzima.
Kulungile emva kweeveki ezintathu zokubhala okungaphantsi, isibheno se ukubeka iphelile kum. Njengoko uElsa waltzes ejikeleze isikrini ngexesha leveki elandelayo, mna, ngekodwa, ngekhe ndibukele.
I-5 yeeKremu ze-CBD ezilungileyo zeNtlungu ye-2021
Ulahlekile kuTshintsho: I-French Pop Star uChristine kunye neQueens Debut kwi-NYC
Inkqubo yeNtolongo yaseMelika ithwaxwa ngamaxabiso aphezulu okufunda nokubhala
Xhuma luvuyo! UBill Gates uqinisekisa ubukho beFabled 'Igumbi leTrampoline' kwiNdlu yakhe
I-Netflix ayisiyonto efihlakeleyo efuna ukuba yiDisney, kodwa ngaba ibeka ukubheja okufanelekileyo?
Ukuphononongwa ngo-2021 ngo-Everlywell: Isebenza njani? Iinkonzo kunye neengozi
Amagcisa ahlekisayo e-Oz: Kutheni amaMelika kufuneka abukele i-Australia 'Dreamland'
Umfana ubhalise nje iminyaka engama-30 yeeNtengiso zeRhafu
I-Saudi Arabia isoyikisa iCanada 9/11, ibonisa imida ye-Twitter Diplomacy
I-5 yeeCadrid zeVape eziPhambili ze-CBD zokuThenga kwi-Intanethi [Uhlaziyo luka-2021]
Okona kutya kulungileyo kwisizukulwana seMAGA? I-Texas ipasile 'Gcina iChick-fil-A' yeBhili
‘URay Donovan’ Redux: 2 × 3 Ukuphinda ubuye - ‘Gem kunye neMali mboleko’
eyona cbd yeentlungu zokuphelisa iintlungu
ezona ndawo zingcono zokuthandana zabantu abadala ngaphezulu kwe-70
I-walt disney anti-semitic mfo wosapho
Ezona pilisi zilungileyo zokunyusa imetabolism
Eyona bhetri yeenqwelo ze-thc